zhinji mapatani Hand trolley hwakasimba rabha upfu vhiri - China Qingdao Miracle Vehicles
pu furo vhiri
rabha hwakasimba vhiri
2018 inopisa Kutengeswa angled simbi sherefu yokuchengetera zvinhu pani
mapatani zhinji Hand trolley hwakasimba rabha upfu vhiri
MDF bhodhi angled simbi pasherefu boltelss yokuchengetera zvinhu pani
shanu akaturikidzana rivet simbi sherefu
wachena rivet yokuchengetera zvinhu sheving zvinhu pasherefu
rivet yokuchengetera zvinhu sheving ratidza pani
dzvuku boltless yokuchengetera zvinhu pasherefu rivet simbi sherefu
yepamusoro 3.50-4 tillers vhiri
China mugadziri kurima matai 4.10 / 3.50-4 kuti ...
hwakanaka yokuchengetera zvinhu pasherefu pamwe MDF bhodhi
dzvuku boltless yokuchengetera zvinhu pasherefu yakaitwa China
rivet nhumbi pasherefu simbi yokuchengetera zvinhu boltless pani
shanu akaturikidzana upfu unhani yokuchengetera zvinhu pasherefu
90 45 * 180cm zvinhu pasherefu yokuchengetera zvinhu boltless sherefu
pfumbu zvinhu pasherefu simbi boltless sherefu
pamusoro yepamusoro upfu unhani zvinhu pasherefu simbi boltles ...
zhinji mapatani Hand trolley hwakasimba rabha upfu vhiri 1.Heavy basa simbi pomukombero hwakasimba rabha vhiri 10 × 2 2.For jenareta, michina, ngoro, mhepo compressor, the washers Doma chakasimba rabha mavhiri Size 10 * 2.75 muenzaniso Line kana sezvo chikumbiro chako Hub urefu Sezvo chinodiwa wako akatakura 12.7 / 16 / 20mm Usage mhepo compressors, bindu ngoro, vhiri barrows Product chikumbiro yakakodzera ose ezvokutengeserana zvingoro diki uye bhara. ukama zvigadzirwa mifananidzo & n ...
Supply Mano: 7000 Pieces pazuva
pasuru: In hombe / In PP bhegi / mu nhovo
1.Heavy basa simbi pomukombero hwakasimba rabha vhiri 10 × 2
2.For jenareta, michina, ngoro, mhepo compressor, the washers
zita chakasimba rabha mavhiri
zera 10 * 2.75
muenzaniso Line kana sezvo chikumbiro chako
Hub urefu Sezvo zvinodiwa yako
bhowa 12.7 / 16 / 20mm
Usage mhepo compressors, bindu ngoro, vhiri barrows
Akakodzera ose ezvokutengeserana zvingoro diki uye bhara.
ukama zvigadzirwa mifananidzo
Qingdao CHISHAMISO motokari CO., LTD hwagadzwa muna 2002, iri West yokumadokero Qingdao. We dzidzira mu mukugadzira uye kwekurasira dzakasiyana simbi uye emapuranga echiShinto, yokuchengetera zvinhu echiShinto, bindu echiShinto, rinorema basa echiShinto, mhuri Kushonga echiShinto uye saka kwerudzii simbi zvigadzirwa; bhara, rabha mavhiri, PU chimiro mavhiri nezvimwewo rabha zvigadzirwa zviri mukati yedu kugadzirwa siyana.
Pahwaro kuunza chigadzirwa yepamusoro, kambani yedu vane mukurumbira wakanaka chaizvo mudzimai uye kumisika. Company inoomerera "Rose-vade takunda takunda pamwe". The zvigadzirwa aivigirwa kuEngland, Zimbabwe, Republic of Armenia, Portugal, Italy, Peru, Middle East, Southeast Asia nezvimwewo kunyika 30 uye kumatunhu.
Miracle motokari mushandirapamwe., Ltd achava akavimbika nokutengesa uye mabhizimisi shamwari yako yose simbi echiShinto, tinoda vose shamwari uye vatengi refu inofadza uye akabudirira nzira.
Previous: MDF bhodhi angled simbi pasherefu boltelss yokuchengetera zvinhu pani
Next: hwakasimba vhiri Hand trolley hwakasimba rabha upfu vhiri rabha mhete
14 padiki simbi pomukombero zvakachipa rabha vhiri 3.50-8
upfu bemhapemha muwedzero simbi sherefu / pani
3.00-4 ruoko marori bhara hwakasimba rabha whee ...
12 * 3.50-5 PU bhara vhiri / bindu tirera W ...
Pane achiri mukaha mumarudzi R & D mari ...